Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Ku saabsan Iswiidhan / In qofka isku filnaado iyo horumar laga gaaro Iswiidhan / Bilow shirkad gaar kuu ah
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 1 11 2021
Qoraalkan wuxuu ku saabsanyahay in la bilaabo shirkad gaar kuu ah. In la bilaabo shirkad gaar kuu ah waxay baddal fiican u noqon kartaa in la raadiyo shaqo gudaha Iswiidhan ah.
Waxaad akhrin doontaa waxa shuruud u ah in la bilaabo shirkad gudaha Iswiidhan. Waxaad xitaa akhrin doontaa nooca caawimaad iyo taageero ah ee aad heli karto haddii aad doonaysid inaad bilowdo shirkad gaar kuu ah.
Si aad u bilowdo shirkad waa in xitaa laguu ansixiyay canshuurta shirkadaha. Canshuurta shirkadaha waxaa mar kasta loo soo gaabiyaa F-skatt.
Xafiiska Shaqada boggiisa waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan nooca caawimaad ee aad ka heli karto Xafiiska Shaqada marka aad bilowdo shirkad gaar kuu ah.